Nanorina ny orinasa mpamokatra herinaratra lehibe indrindra any Afrika - i Ghana
Lizy Ghana dia nitokana tamin'ny Oktobra 2015, ivon-toeram-pamokarana angovo lehibe indrindra eto Afrika. Miaraka amin'ny fahaizan'ny famokarana 155 MW, ny firenena dia hamarana ny olana misy amin'ny fiankinan-doha amin'ny firenena izay iharan'ny fijaliana maro.
Azo heverina fa io no tetik'asa ambony indrindra ao Afrika amin'ny sehatry ny angovo avy amin'ny masoandro. 183 hektara amin'ny tanànan'ny Aiwiaso (andrefana Ghana) no hararaotina amin'ny fametrahana ny toby famokarana herinaratra. Ny fanatanterahana ny tetikasa Nzema, tombanana ho 400 tapitrisa dolara (eo amin'ny 306 tapitrisa Euros), dia nankinina tamin'ny British "Blue Energy". "Nzema dia hiasa tanteraka amin'ny 2015 ary hanana herin'ny 155 MW, izay hahatonga azy io ho iray amin'ireo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao satria zavamaniry telo ihany no manana fahefana lehibe noho io", hoy ny vondrona anglisy.
Raha atambatra, 630000 500 mahery ny panneaux photovoltaic hapetraka ao amin'ilay tranokalan'ny tetikasa. Nzema dia manana tombony hafa amin'ny lafiny toekarena. Araka ny filazan'ny manampahefana ghaneana, ny orinasa dia handrisika ny mpiasa any Ghana. Hamorona asa maharitra 2100 ny tetikasa. Araka ny gazety dia asa miisa XNUMX amin'ny harinkarena eo an-toerana no hampirisihana (fananganana asa).
Raha tsiahivina, miankina amin'ny tobin-herinaratra hydraulic fotsiny i Ghana, ary mampiharihary izany amin'ny fiovan'ny toetr'andro (fidinan'ny famokarana raha misy haintany).
Ny Fampianaran'ny Tempoly - Vol 1 (PDF)
Momba ny fitovian-dazan'ny olona - Anténor Firmin
Ny herin'ny fisainana tsara - Norman Vincent Peale (Audio)
Ny mpahay siansa afrikana dia mahita fitsaboana amin'ny homamiadana
Tsy ho ela dia ny fananganana TGV izay hampifandray an'i Maraoka, Alzeria ary Tonizia